40 foomamka HTML iyo CSS ee diiwaangelinta koontada, lacag-bixinta iyo in ka badan | Abuurista khadka tooska ah
Haddii ay jiraan wax caadi ahaan aad ugu badan nooc kasta oo degel ah, kuwani waa foomamka. Foomamka aan u isticmaalno inaan ku buuxino macluumaadka xiriirka, geli faahfaahinta bangiga, gasho shabakad bulsheed ama si fudud u samee baaritaan sida midka aan maalin walba ku sameyno mashiinka raadinta Google.
Marka maanta waxaan ku tusinaynaa 40 foom oo CSS ah oo ka bilaabma foomamka xiriirka, kaararka deynta, ka soo bixitaannada, fudud, rukunka ama xitaa ansaxinta. Noocyo taxane ah oo qurux badan iyo qaab si loo siiyo qodobkaas gaarka ah websaydhkaaga, iyadoon loo eegin dulucda.
1 Foomka xiriirka Minimalist
2 Foomka Minimalist
3 Foomka xiriirka guridda
4 Foomka xiriirka warqadda
5 La kordhiyay foomka xiriirka
6 Foomka Xiriirka UI
7 Kaadhka lacag bixinta
8 Naqshadeynta kaarka deynta
9 Kaarka amaahda UI
10 Ka falcelinta Iibinta
11 Kaarka lacag bixinta
12 Bixinta kaarka amaahda
13 Kaarka amaahda
14 Talaabo talaabo talaabo ah
15 Foomka isdhexgalka
16 Talaabo talaabo talaabo ah
17 Tallaabo tallaabo
18 Foom Jquery badan oo tallaabo ah
19 Foomka animation UI
20 Foom abuurista / soo galitaanka koontada
21 Maska Sare
22 Shaashadda galitaanka
23 Soo gal naqshada UI
24 Soo gal iyo sameynta koontada UI
25 Khaladaadka foosha xun
26 Soo gal CSS HTML
27 Foomka soo galida moodeelka
28 Foom flexbox ah
29 Sanduuqa animation
30 Goob goobitaan
31 Goob sahlan oo raadinta ah guji
32 Saamaynta qoraalka CSS
33 Raadinta shaashad buuxda
35 Su'aalo ma jiraan
36 Foomka rukunka popup
37 Sanduuqa rukunka UI
38 Sanduuqa rukunka CSS
39 Sanduuqa rukunka
40 Foomka ansaxinta EMOJI
Foomka xiriirka Minimalist
Kuwa kale foomka ugu yar, inkasta oo kaliya CSS inay ahaato a foom fudud oo saameyn-sare leh. Ma laha animations-yada ugu yar ee kii hore, laakiin waxay si fiican u fulisaa ujeedkeeda.
Foomka xiriirka guridda
Foomka xiriirka guridda, Naqshad aad u qurux badan. Ka jawaab celinta websaydhadaas in laga arko mobilka, inkasta oo ayna ku jirin ansaxinta.
Foomka xiriirka warqadda
Este foomka xiriirka waxay leedahay animation halkii xiiso leh: warqad ayaa la sameeyaa. Fudud, laakiin aad u faa'iido badan oo leh midab badan.
La kordhiyay foomka xiriirka
Este foomka xiriirka la ballaariyey Kaliya waa dhamaadka hore waxayna leedahay ansaxinta jQuery. Waxaan gujineynaa badhanka sabeynaya foomkuna wuxuu la muuqan doonaa animation firfircoon. Heersare ah.
Foomka Xiriirka UI
Foomka Xiriirka UI waa qaab lagu sameeyay HTML iyo CSS. Waxay u taagan tahay ahaansho kaarka xiriirka fudud in aan buuxin karno si aagga qoraalka kaliya u beddelo markii la riixo.
Kaadhka lacag bixinta
Naqshadeynta kaarka deynta
CSS saafi ah loogu talagalay a isugeyn kaararka deynta ee midabada fidsan. Midab leh oo aad u fudud oo awood u leh muujinta tayada iyo xirfad-yaqaanimada.
Kaarka amaahda UI
Ka falcelinta Iibinta
Ka falcelinta Iibinta, lagu sameeyay React.js, waxaa lagu kala soocay sawirka dhinac ah oo aan u habeyn karno adeegyada ama alaabada aan ku iibino e-commerce.
Kaarka lacag bixinta
Iibsashadaani waxay u taagan tahay suurtagalnimada in sawir lagu dhejiyo kaarka. A foom fudud oo cad oo lagu sameeyay CSS3, HTML5 iyo xoogaa jQuery. Tayo sare oo ka duwan inta hartay ee liistada. Waad soo dejisan kartaa Halkan bixinta kaarka lacag bixinta.
Bixinta kaarka amaahda
Xarrago leh lacag bixinta kaarka ka duwan kuwa kale oo salka ku haya kaarka deynta oo ku yaal xagga sare Markaa tan hoose waxaan haysannaa foomka oo dhan oo leh xog kala duwan oo macmiilku ku khasban yahay inuu buuxiyo si uu ugu bixiyo lacagta eCommerce
Talaabo talaabo talaabo ah
Este foomka talaabo talaabo ah waxay u taagan tahay inay tahay hal abuur. Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalaha si aad ugu laaban kartid iyaga wakhti kasta adoo muuqaal ahaan marwalba jooga shaashadda.
Foom Jquery badan oo tallaabo ah
Hadaad leedahay a foom aad u dheer, tani waa mid ku habboon qaybaha kala duwan oo leh bar horumar aad u la yaab leh. Iyada oo ku saleysan jQuery iyo CSS, waxay u taagan tahay naqshadeynta iyo xarrago weyn.
Foomka animation UI
Kala guurka tan samee animation UI waxay yihiin ku saleysan Domink Marskusic. Feejignaanta saameynta hal-abuurka ah ee sanduuqa buluugga ah markaan gujineyno qaar ka mid ah labada aag ee soo galidda ama soo galida.
Foom abuurista / soo galitaanka koontada
Maska Sare waa mid ka mid ah marinka ugu xiisaha badan liis kasta oo u taagan tahay animation xarrago leh taasi waxay u muuqataa si deg deg ah daqiiqada aan gujino midkood labada dhinac.
Ilaahnimadan naqshaddan shaashadda galitaanka iyaguna waa kuwooda animations iyo sida hal abuur leh waa. Haddii aad rabto inaad noqoto tan ugu waqtiga badan marka ay timaado naqshadeynta websaydhka, foomkan lama waayi karo. Lama huraan.
Soo gal naqshada UI
Loogu talagalay iyadoo la adeegsanayo HTML, Sass, iyo jQuery. Soo gal naqshada UI es esharciyeysan oo cad mawduuca aan ka maqnayn animations jilicsan si uu u noqdo mid kale oo ka mid ah kuwa ugu cadcad liiska.
Soo gal iyo sameynta koontada UI
Khaladaadka foosha xun
Khaladaadka foosha xun Waa login weyn sababtoo ah animation of beeraha leh wax laga xumaado. Asal ahaan noqosho madadaalo, taxaddar la'aan iyo galitaan aad u kala duwan. Asal ah oo aan shaki ku jirin boggayaga.
Soo gal CSS HTML
Soo galitaanka xiisaha leh by astaamaha kala duwan taasi waxay muujineysaa mid kasta oo ka mid ah beeraha inuu booqdo booqde meel kasta oo aan dooneyno. Hoosyada lagu xushay midabada sidoo kale way istaagaan. Wax animation ah malahan Waxaa lagu sameeyay HTML iyo CSS si loogu hirgaliyo websaydhka macmiil ama kuweena.
Foomka soo galida moodeelka
Este Foomka soo galida moodeelka waxaa u waxyooday luqadda naqshad loo yaqaan Naqshadeynta Waxyaabaha. Waxaan ku aragnay codsiyo badan oo ku saabsan qalabka moobiilka. Nidaamkan waxaan ku leenahay guddi galitaan iyo guddi diiwaangelineed oo si qarsoodi ah u qarsoon. Guddiga diiwaangelinta waa la hawlgelin karaa adigoo gujinaya sadarka buluugga ah ee ku yaal dhinaca midig. Waxay leedahay animation weyn in ay ahaato mid soo gal aad u gaar ah oo cajiib ah.
Foom flexbox ah
Waxaan ku bilaabaynaa foomamka raadinta tan foomka ku saleysan sanduuqa. Waxay u taagan tahay midabka casaanka ah ee «raadinta» iyo in yar oo dheeraad ah oo ku saabsan goob raadinta xarrago leh ee boggaaga.
Una xariiq weyn ayaa ka socota shaashadda si markaa markaan u riixno aan u bilowno qoritaanka raadinta. Badhanka qaada si tan loo qeexo foomka raadinta fudud.
Goob sahlan oo raadinta ah guji
Goob sahlan oo raadinta ah guji waxay ku saleysan tahay isdhexgal lagu arkay Barnaamijka Waze Driver Community baabuur. Dhammaan astaamaha iyo sawirrada waxaa lagu sameeyaa CSS. Waxay u taagan tahay astaamahaas noo oggolaanaya inaan fulino baaritaanno gaar ah oo loogu talagalay wax soo saar ama adeeg. Garaacis sida ay qabow u tahay darteed.
Saamaynta qoraalka CSS
Saamaynta qoraalka CSS waxaa ku jira taxane ah animations ee qoraalka iyo khaanadda raadinta si taxaddar leh u raadsada qaab ahaan.
Raadinta shaashad buuxda
This entry from ka raadinta shaashad buuxda waxay la shaqeysaa nooc kasta oo khariidad ah ama boos ah. Waxay ubaahantahay qaabab weel gaar ah iyo walxaha raadinta dul-saaran in la dhigo xididka. Waxaa lagu gartaa animation boodboodka xilligan aan riixno badhanka raadinta.
Un foomka raadinta fudud in wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro boosaska kala duwan iyo animations. Waxaan gujineynaa badhanka raadinta oo khaanadda dhammaystiran ayaa u muuqata inay qorto ereyada. Aad u socda oo aad loogu taliyay sida ugu fudud ee ay tahay.
Su'aalo ma jiraan
Su’aal maleh es foomka fudud oo leh qoraalka qoraalka iyo ikhtiyaarka xulashada jawaabaha qaarkood ee adeegsadaha si uu u xusho. Heshiis weyn oo muuqaal ah inuu noqdo midka ugu fiican.
Foomka rukunka popup
Arrintan awgeed foomka rukunka popup, waxaan gujineynaa badhanka sabeynta oo annagana way nagu qaadan doontaa foomka oo leh cod aad u qosol badan iyo goob lagu galo emaylka. Ku habboon suuqgeynta emaylka.
Sanduuqa rukunka UI
Una sanduuqa rukunka leh gambaleelka digniinta ah iyo wax yar oo ka badan midabada fidsan Naqshadeynta.
Sanduuqa rukunka CSS
Una sanduuqa rukunka smart xaqiiqda ah isticmaal gradients badhanka isdiiwaangalinta sida midabka guduudan ee duurka.
Una sanduuqa rukunka fudud laakiin saameyn weyn ayey ku leedahay qaabeynta.
Foomka ansaxinta EMOJI
In saafi ah CSS tan foomka ansaxinta si loo abuuro furaha ama lambarka sirta ah Marka aan qoreyno, emoji-ga ayaa cabbiri doona heerka amniga ee foomka. Qosol badan oo xiiso leh shaki la'aan.
Ha moogaan tan liiska 23 fallaadho oo firfircoon oo ku yaal CSS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 40 foomam CSS ah oo aan lagu waayi karin degel kasta
Tusaalooyin aad u fiican oo tusaalayaal ah ayaa halkan lagu soo bandhigay. Kala duwanaanta iyo la qabsiga duruufaha kala duwan iyo waxa ugu fiican ayaa ah in iskuxirka cinwaan kasta uu ka kooban yahay demo iyo koodhka isha inkasta oo ay tahay inaad ku iftiimiso badhanka «Eeg demo» maxaa yeelay waxay ahayd xiisaha aan u helay cinwaanka. . Waad ku mahadsantahay wax ku biirinta. Salaan ka timid Caracas.
Jawaab Juan Juan Perez
Aad bay ii caawisay, mahadsanid.
U jawaab Rodolfo Gallegos